AdAway APK ကိုအခမဲ့ဒေါင်းလုပ် | မိုဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
AdAway APK ကိုအခမဲ့ဒေါင်းလုပ်
AdAway APK ကိုအခမဲ့ဒေါင်းလုပ်:
As is usual with this type of application, with adAway, you can createa‘whitelist’ of websites to which you can add exceptions if you want. Of course, you can also add more hosts to your blacklist if you want, လွန်း. But no matter what you decide to do, all the settings can be configured according to your preferences.
It is important to note that to use adAway, you’ll needarooted device. If your Android device is not rooted, you won’t be able to access all the features described above. To solve this, သို့သော်, you can always download an application like Towelroot from Uptodown.
adAway is an excellent tool for blocking ads, and although it isn’t available via Google Play (or perhaps because of it), it has plenty of great features. Plus အား, its user interface is simple, convenient, လွယ်ကူထူထောင်ရန်.
ဗားရှင်း: 3.3 (61)
ဖိုင်အရွယ်အစား: 19 mb
AdAway APK ကိုဒီနေရာတွင် Download
TuneIn: stream NFL ရေဒီယို, ဂီတ, အားကစားဆိုင်ရာ & podcasts Apk – လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
ကဏန်း APK ကိုဘုရင်အကောင်းဆုံး Apps ကပမိုဘိုင်း Download
Android အတွက် LiveNetTV App ကိုဒေါင်းလုပ် | နောက်ဆုံးရတိုက်ရိုက်တီဗီ APK ကို – လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
Shazam APK ကိုဒေါင်းလုပ် | မိုဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
Messenger ကို Lite ကို APK ကိုဒေါင်းလုပ် | မိုဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
Pokemon Duel APK ကိုဒေါင်းလုပ် – လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
VPlayer APK ကိုအခမဲ့ဒေါင်းလုပ် | အကောင်းဆုံး Apps ကပ…
Speedtest APK ကိုဒေါင်းလုပ် | သည်အကောင်းဆုံး Apps ကပ…
IMO Lite ကို .apk ဒေါင်းလုပ် | အကောင်းဆုံး Apps ကပ…
အကြှနျုပျ၏ Tamagotchi ထာဝစဉ် APK ကိုဒေါင်းလုပ် – အကောင်းဆုံး…
ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ခေတ်: Horde ကျူးကျော် APK ကိုဒေါင်းလုပ် – …
YesPlayer .apk ဒေါင်းလုပ် – Best App For…
WWE SuperCard .APK Download | အကောင်းဆုံး Apps ကပ…
IMO Lite ကို .apk ဒေါင်းလုပ် – လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံး Android apps…
လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ – Text Free .APK Download Text…
HOOQ .apk ဒေါင်းလုပ် | သည်အကောင်းဆုံး Apps ကပ…
လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ – HOOQ .APK Download HOOQ .APK…
Microsoft Bing Search .APK Download | အကောင်းဆုံး…
Microsoft Bing Search .APK – အကောင်းဆုံး Apps ကပလက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက် Download…
အကောင်းဆုံး Apps ကပမိုဘိုင်းအတွက် Download – Xbox Game Pass .APK…